အင်ဒိုနီးရှားတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများနမူနာတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်လက်မထပ်ဘဲလိင်ဆက်ဆံခြင်း (2013) - Your Brain On Porn
အစွန်းရောက်ကျန်းမာရေးလိင်။ 2013 ဇွန် 20 ။
Hald GM က, Mulya TW.
တစ်ဦး Sexology ၏ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများဦးစီးဌာန, ကိုပင်ဟေဂင်တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ, ကိုပင်ဟေဂင်တက္ကသိုလ်, ဒိန်းမတ်။
အင်ဒိုနီးရှားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦးနမူနာနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုခြင်း, ဒီလေ့လာမှုပျံ့နှံ့နှုန်းနှင့်ပုံစံများစုံစမ်းစစ်ဆေး ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း အင်ဒိုနီးရှား, တင်းကြပ်တိုက်ဖျက်ရေးနှင့်အတူဘာသာရေး, လိင်ရှေးရိုးစွဲမွတ်စလင်အများစုရှိသည့်နိုင်ငံအတွက်စားသုံးမှုဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း ဥပဒေများ။ အကြားထို့ပြင်အသင်း ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း စားသုံးမှုနှင့်ဘုံ Non-အိမ်ထောင်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုစူးစမ်းခဲ့သည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုသောဤနမူနာ၌တွေ့, ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း အဖြစ်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အလွယ်တကူအများစုအပေါ်အလွန်နည်းပါးသည့်ဥပဒေများနှင့်အတူပိုပြီးလိင်လစ်ဘရယ်များနှင့်လျော့နည်းဘာသာရေးနိုင်ငံတွေကနေအနောက်တိုင်းနောက်ခံနမူနာအသုံးချဖို့နှိုင်းယှဉ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ၌ရှိသကဲ့သို့လောင်နေသည် ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း.
၏ပုံစံများအတွက်ကျားမကွဲပြားမှု ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း စားသုံးမှုသိသာနှင့်နိုင်ငံတကာရှိသော counterpart လေ့လာမှုများအတွက်တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ သာယောက်ျားအဘို့, ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း စားသုံးမှုသိသိသာသာ Non-အိမ်ထောင်ရေးဆက်ဆံရေးအတွက်ဘုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုပျံ့နှံ့နှုန်းနှင့်ပုံစံများသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ် ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း စားသုံးမှုနှင့်တင်းကျပ်သောတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့လိင်ရှေးရိုးစွဲမွတ်စလင်အများစုရှိသည့်နိုင်ငံအတွင်းရှိဘုံ Non-အိမ်ထောင်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း ဥပဒေများ။